यी ३ राशी भएका श्रीमतीहरुले श्रीमानको जस्तो सुकै दु:खमा पनि दिन्छन् साथ – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Horoscope/यी ३ राशी भएका श्रीमतीहरुले श्रीमानको जस्तो सुकै दु:खमा पनि दिन्छन् साथ
यी ३ राशी भएका श्रीमतीहरुले श्रीमानको जस्तोसुकै दु:खमा पनि दिन्छन् साथ । श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुई पाग्रा जस्तै हुन् किनभने एक अर्काको साथ विना जीवन असफल हुन्छ । जीवनमा यी दईबीचको मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्छ ।
हामीले धेरै उदाहरणहरु पनि देखेका र सुनेका छौँ । विवाहपछि श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रदा जीवन नै पुरै सखाप भयो भन्ने । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार राशीको मेल नहुदाँ पनि श्रीमान श्रीमतीमा झगडा हुन्छ । त्यसैले आज हामी श्रीमानको जस्तोसुकै दु:खमा पनि साथ दिने राशीको बारेमा कुरा गदैछौँ । हेर्नुस् कुन कुन राशीहरु हुन् ? जानी राखौ ।
मेष राशी – यो राशी हुने महिलाहरु दिमागी हिसाबले एकदमै चलाख र क्षमतावान हुन्छ । जो घर ,परिवार र समाजमा सधै अघि हुन्छन् । त्यसैले यो राशी भएका श्रीमतीहरु जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान गर्ने सक्ने भएकाले श्रीमानको दु:खमा सधै हातेमालो गर्छन् ।
वृश्चिक राशी – यो राशी भएका महिलाहरु पनि सफा मनको भएकाले दु:ख र सुख जस्तोसकुै अवस्थामा पनि रमाउन सक्छन् । त्यस्तै आफ्नो श्रीमानलाई साथ दिने कुरामा पनि निकै अग्रसर नै हुन्छन् । त्यसैले परिवारदेखि समाजसम्म यी राशीका महिलालाई सबैले मन पराउँछन् ।
कन्या राशी – कन्या राशी भएको महिलाहरु पनि सधै सकरात्मक सोच लिएर हिड्ने भएकाले एकदमै सरल स्वभावका हुन्छन् ।जसले गर्दा यो राशी भएका महिलाहरु श्रीमानको दुखलाई आफ्नो दु:ख मानेर सधै साथ दिन्छन् । यो राशीका महिलाहरु पनि सबैको नजरमा सहयोगी भावनाको कारण राम्रो हुन्छन् ।
जय! पाथिभरा माता !! बिहानै पाथिभरा माताको दर्शन गरिआज वैशाख २४ गते बुधबारको राशिफल पढ्नुहोस , यस्तो छ तपाईको राशिफल